नेपालमा पछिल्लो २४ घण्टामा नयाँ संक्रमण देखिएन | Kendrabindu Nepal Online News
२२ बैशाख २०७७, सोमबार १६:२८
काठमाडौं । नेपालमा पछिल्लो २४ घण्टामा कोरोना भाइरसका नयाँ संक्रमित भेटिएका छैनन् । सोमबार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. विकास देवकोटाले दिएको जानकारी अनुसार अहिलेसम्म नयाँ संक्रमित नभेटिएका हुन् । अहिलेसम्म नेपालमा कूल संक्रमितको संख्या ७५ रहेको छ । जसमा पुरुष ५८ र महिला १७ जना रहेका छन् ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. विकास देवकोटाले दिएको जानकारी अनुसार देशभर १३ हजार ६ सय ४० पीसीआर परीक्षण गरिएको छ । भने ५० हजार ८ सय ४५ आरडीटि परीक्षण गरिएको छ । त्यस्तै पछिल्लो २४ घण्टामा १ हजार ३ सय ८२ परीक्षण गरिएको छ । देशभर क्वारेन्टाइनमा रहेकाको संख्या २१ हजार ५ सय २३ रहेको छ भने आइसोलेसनमा हुनेको संख्या १ सय ६ रहेको छ । जसमा उपत्यकामा १ र उपत्यका बाहिर १ सय ५ जना रहेका छन् ।
नेपालमा पहिलो पटक गत माघ १० गते चीनबाट फर्किएका ३२ वर्षिय नेपाली नागरिकमा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको थियो । अहिलेसम्म कोरोना संक्रमणबाट पूर्ण रुपमा निको भएर घर फर्किनेको संख्या १६ पुगेको छ ।
Prevसरकारी वकिल कार्यालयमा सांसद यादवको अपहरण सम्बन्धि निवेदन दर्ता
बजेट छलफलमा सक्रियता बढाउँदै अर्थमन्त्री खतिवडाNext